Inqubomgomo yokubuyisa nokulethwa
Abahlinzeki banga (ikakhulukazi ama-oda wangokwezifiso) badinga isikhathi esengeziwe sokucubungula ngaphambi kokuthunyelwa kwento. Amakhasimende azokwaziswa kulezi zimo. Izikhathi zokucubungula ezimaphakathi ezivela kubaphakeli ziba phakathi kwezinsuku ezi-1 kuye kwezingu-5. Ngokuya ngendawo ongaya kuyo e-US noma emazweni omhlaba, sicela uvumele phakathi kwezinsuku ezi-1 kuye kwezingamashumi amathathu ukuze i-oda lakho lifike. Ama-oda womkhiqizo ngaphakathi kwe-US anamafreyimu wesikhathi esheshayo. Uma kudlule izinsuku ezingaphezu kwezingu-30 sicela usithumele i-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe] ukubuyekeza isimo se-oda lakho.
Sifaka kuphela izinto uma zinephutha noma zilimele. Uma udinga ukuyishintshanisa ngento efanayo, sithumele i-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe] bese uthumela into yakho ku: 2005-180B Sandalwood Parkway E Brampton Ontario CA L6P0H3.